N'ogbe 40ogbe faiba glaasi ndọtị n'ọkwá FGEH40 Manufacturers and Suppliers | ABC
FGEH40 bụ ọkaibe na-arụ ọrụ ndọtị nke nwere akara dị elu nke ụdị IA, nke pụtara na ọ nwere ikike ibu nke 300 pound. O nwere ngụkọta nke usoro 40, obosara nke 470mm, ogologo mgbatị nke 11400mm, na ibu nke 40kg.
FGEH40 bụ ọkaibe na-arụ ọrụ ndọtị nke nwere akara dị elu nke ụdị IA, nke pụtara na ọ nwere ikike ibu nke 300 pound. O nwere ngụkọta nke usoro 40, obosara nke 470mm, ogologo mgbatị nke 11400mm, na ibu nke 40kg. Njikọ njikọta-ụzọ ụgbọ okporo ígwè dị iche iche pụtara na ọ nwere arụmọrụ mgbochi. Ogwe D na-eguzogide ọgwụ ma na-ejikọta rails n'akụkụ. Enwere ike iji ụkwụ abụọ rụọ ọrụ na ike ma ọ bụ nwee ike ịbanye ma nwee ike ịtụgharị ya. A na-ekewapụta akụkụ ndị dị n'okpuru na nkebi ofufe iji jiri ngalaba isi dị ka otu ubube. Durable okporo ígwè na-eche nche brackets na eji akpụkpọ ụkwụ na-enyere aka ichebe ala nke ụgbọ okporo ígwè. A na-ama ụzọ ụgbọ okporo ígwè nke akụkụ a na-ebugharị n'elu iji dọọ ngwa ngwa ngwa ngwa na saịtị.
1. Stell-plated swivel nchekwa akpụkpọ ụkwụ na-enye ndị ọrụ nchekwa ma kwụsie ike.
2. Njikọ atọ ahụ pụtara arụmọrụ ntụgharị.
3. Nche mkpọchi na ngwa ngwa ịmachi usoro na-ahụ ọkwa ubube agbatị.
4. Ileghara-eguzogide 1-5 / 8 "D-rungs
5. Ezigbo ọrụ pole na polypropylene eriri, mfe-eweli.
6. A na-ejikọta rails n'akụkụ ya na rails dị n'ime iji jikọta rails n'ụzọ siri ike.
7. Direct kụrụ ka okporo ígwè njikọ na-enye mma na anwụ ngwa ngwa.
8. Faiba glaasi Ọdịdị ana achi achi eletriki nchekwa.
Na mgbakwunye na usoro FGEH, anyị na -emepụta usoro FGE nke ladders telescopic. Isi ihe dị iche n’agbata usoro abụọ ahụ bụ na ibu akara nke usoro FGEH bụ ụdị IA (nke pụtara na o nwere ikike ibu nke 300 pound), ebe ibu akara nke usoro FGE bụ ụdị II (nke pụtara na o nwere ibu. ikike nke 225 pound), Ma ha niile nwere ike iji gburugburu ọkụ eletrik, dị nnọọ mma maka ọrụ niile site na azụmahịa na ụlọ obibi na ndozi ụlọ ọrụ.
Ọ bụrụ na ị nwere mmasị na ngwaahịa anyị, biko kpọtụrụ: 0086- (0) 532-88186388 info@abctoolsmfg.com, anyị ga-aza gị n'ime 24 awa.
Nke gara aga: FGHP103S 300lbs ibu ikike faiba glaasi n'elu ikpo okwu nzọụkwụ n'ọkwá
Osote: Steprịgo Nzọụkwụ Ubu CSA ANSI Kwadoro Multi Nzube 5 Nzọụkwụ Single Side Faiba glaasi Ladder
40 Nzọụkwụ ụkwụ
Ime ụlọ ime ụlọ Ogbe shelf Obere Nchekwa Obere Shelf maka ulo Mpempe akwụkwọ nchekwa edo edo Ngalaba Na-ahụ Maka Azụmaahịa